Amakhuphoni kadokotela ayi-10 anokonga okukhulu kakhulu - Inkampani | Septhemba 2021
Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Cindezela Imidlalo Ukuphuma Umphakathi Izindaba, Wellness Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Ezempilo Imfundo Yezempilo, Izindaba Umphakathi, Inkampani Inkampani, Imfundo Yezempilo Izindaba Imfundo Yezempilo Inkampani Izidakamizwa Vs. Umngani
Main >> Inkampani >> Abasebenzisi be-SingleCare babona ukonga okukhulu kulezi zidakamizwa eziyi-10
Ngokwesilinganiso, abaseMelika basebenzisa imali ethe xaxa emithini kadokotela ngonyaka kunalokho noma ikuphi emhlabeni . Izizathu ziningi kakhulu— ukuntuleka komthethonqubo , ukuvikelwa kwelungelo lobunikazi, ukunyuka kwamanani entengo ekunikezelweni kwezinto, kanye nokuntuleka kokucaca okuphelele ngamanani entengo. Lapho umthengi ojwayelekile engazi ukuthi yini ebangela amanani aphezulu, noma ukuthi ukuqhathaniswa kwentengo kungenzeka, kunzima ukuthola izindleko eziphansi kakhulu.
Ukucaciswa kwentengo yemithi kadokotela kuyithuluzi elibalulekile kubantu baseMelika abalwela ukuthenga imithi yabo, kusho uShaili Gandhi, iFarm.D., Iphini likamongameli wezinto ezenziwa e-SingleCare. Abaningi abaqapheli ukuthi bangonga amakhulu ama-dollar ngenyanga ngezidakamizwa ngokusebenzisa ikhadi lesaphulelo sodokotela futhi bathengele amanani aphansi.
valtrex kuthatha isikhathi esingakanani ukusebenza
Amakhemisi ahlukene avame ukugcwalisa umuthi ofanayo ngamanani ahlukene. Nge-SingleCare's ikhadi lesaphulelo somuthi , ungaqhathanisa amakhemisi endawo futhi wandise ukonga kwakho. Ukuphela kokufanele ukwenze ukucinga kadokotela wakho kithi iwebhusayithi noma ukusebenzisa uhlelo lwethu lokusebenza . Izaphulelo ze-SingleCare kadokotela zingakusindisa ngokungafika ku-80%.
Amashadi we-SingleCare okucaciswa kwamanani entengo akuvumela uqhathanise intengo yemali nokongiwa kwe-SingleCare konyaka odlule, kusho uRamzi Yacoub, Pharm.D., Isikhulu sekhemisi sakwaSingleCare. Uma ingaphansi kwe-copay yakho yomshwalense, uyazi ukuthi wonga imali.
Ungazithumelela isigqebhezana, usiphrinte ngokushesha, noma usifake ku-wallet yakho yedijithali. Ngemuva kwalokho, mane ulethe isigqebhezana sakho se-SingleCare kwikhawunta yekhemisi.
Musa ukukhokhela intengo yemali yekhemisi lakho ngemithi yakho! Amakhuphoni kadokotela weSingleCare anikeza ukonga kwesikhathi sangempela emithini kadokotela engaphezu kuka-10,000. Nazi izidakamizwa eziyi-10 ezithandwayo ezinokonga okukhulu kakhulu kwabasebenzisi be-SingleCare.
Izidakamizwa Amaphesenti alondolozwe ngabasebenzisi be-SingleCare * Thola isigqebhezana
I-Lamotrigine ER 91% Thola isigqebhezana
I-salicylic acid 88% Thola isigqebhezana
UDapsone 87% Thola isigqebhezana
I-Diphenhydramine 86% Thola isigqebhezana
I-Modafinil 84% Thola isigqebhezana
Anastrozole 79% Thola isigqebhezana
I-Repaglinide 75% Thola isigqebhezana
Enoxaparin sodium 74% Thola isigqebhezana
Clonidine 73% Thola isigqebhezana
I-Urea 73% Thola isigqebhezana
*Amaphesenti asuselwe kudatha yokuthengisa ye-CVS kusuka ngoJuni 2020. Amaphesenti wokonga ayahluka ngekhemisi elidayisa futhi angashintsha.
Amaphesenti alondoloziwe: 91%
I-Lamotrigine ER , okujwayelekile kwe I-Lamictal , i-anticonvulsant esetshenziselwa ukulawula ukuqubuka ezinganeni nakubantu abadala abanesifo sokuwa. Ibuye isetshenziselwe ukwelapha isifo se-bipolar. Noma lo muthi ungowokujwayelekile, intengo ejwayelekile yemali yeLamotrigine ER kumakhemisi amakhulu, ezweni lonke angaba ngama- $ 500. Kubasebenzisi bekhadi le-SingleCare, kungaba ngaphansi kuka- $ 50.
2. I-salicylic acid
Amaphesenti alondoloziwe: 88%
I-salicylic acid umuthi oyisihloko osetshenziselwa ukwelapha izimo ezahlukahlukene zesikhumba, kufaka phakathi induna. Ngenkathi ungathenga amandla aphansi e-salicylic acid ngaphezulu kwekhawunta, amanye izimo zidinga amandla kadokotela . Ekhawuntareni yekhemisi, umthamo wamandla kadokotela we-salicylic acid ungabiza — kepha hhayi ngemali oyongele i-SingleCare!
Amaphesenti alondoloziwe: 87%
UDapsone yi-Rx elwa namagciwane futhi elwa nokuvuvukala ebekiwe ukwelapha izimo zesikhumba ezifana nezinduna ezinzima. Lesi sidakamizwa esijwayelekile sitholakala ku-gel noma kuthebhulethi futhi sitholakala ngemithamo eyahlukahlukene. Noma iDapsone inguhlobo olujwayelekile, intengo yemali yokugcwaliswa okukodwa ngaphandle kwekhadi le-SingleCare isengaba ngaphezu kwe- $ 500.
Amaphesenti alondoloziwe: 86%
ungathatha i-zyrtec ne-benadryl ndawonye izifuba
I-Diphenhydramine , evame ukwaziwa ngegama layo lomkhiqizo UBenadryl , iyi-antihistamine. Uma uthola ukungezwani nekati lakho, noma impova nje esemoyeni, kunganikeza ukukhululeka ekuthimuleni, ukulunywa, isifuba, noma ezinye izimpawu zokungezwani komzimba.Abantu abaningi abazi ukuthi imikhiqizo yasesitolo efana nale ingathengwa ngesaphulelo. Kuthatha nje ucingo kumhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola incwadi kadokotela.Ngekhuphoni le-SingleCare, ungonga imali efinyelela ku-86% emalini yentengo. Njengoba ukungezwani komzimba kungahlala isizini yonke — noma ngaphezulu, uma i-allergen ikhona unyaka wonke, lokho kulondolozwa kungangeza ngaphezu kwesikhathi eside.
OKUSHIWO: Ngingakwazi ukusebenzisa ikhadi lokonga kadokotela ngemithi engathengiswa ekhawunteni?
Amaphesenti alondoloziwe: 84%
I-Modafinil kuyisikhuthazi esiphatha izimo zokulala ezingapheli njenge-narcolepsy kanye ne-apnea yokulala. I-Modafinil ivame ukunikezwa njenge-generic ye- I-Provigil futhi uyi into elawulwayo . Abasebenzisi bekhadi lesaphulelo seSingleCare bangonga kuze kufike ku-84%, futhi abaningi bakhokha amakhulu amadola ngaphansi kwenani elijwayelekile lemali kwikhawunta yekhemisi.
Amaphesenti alondoloziwe: 79%
Anastrozole , okujwayelekile I-Arimidex , yiphilisi elisetshenziswa ngokuhlanganyela nezinye izindlela zokwelapha (njengokuhlinzwa nemisebe) ukwelapha umdlavuza webele kwabesifazane asebefinyelele esikhathini sokuya esikhathini. Isebenza ngokunciphisa amazinga e-estrogen emzimbeni. Kwabesifazane abathile abasengozini enkulu, kungahle kunikezwe i-prophylactically ukuvimbela umdlavuza webele. Ithathwe njengephilisi, le chemotherapy yehomoni iyabiza kakhulu lapho ukhokha intengo ephelele. Abasebenzisi be-SingleCare bakhokha kuphela ingxenyana ethile yezindleko zemali, bonga kuze kufike ku-79%.
Amaphesenti alondoloziwe: 75%
I-Repaglinide ngumuthi osetshenziswa ngomlomo osiza ukulawula ushukela wegazi kubantu abanesifo sikashukela soHlobo 2. Kuyasiza ukukhuthaza ukukhiqizwa kwe-insulin ukunciphisa ushukela ojikeleza emzimbeni. Kuthathwa ngaphambi kokudla, ngakho-ke kaningi nsuku zonke-futhi awufuni ukuphuthelwa umthamo. Ngaphandle kwe-SingleCare, lokhu kwelashwa kungabiza amakhulu amadola. Ngokonga okungafika kuma-75% entengo, kungabiza kakhulu.
8. I-Enoxaparin sodium
Amaphesenti alondoloziwe: 74%
Enoxaparin sodium ( i-generic Lovenox ) i-anticoagulant ejojowejwayele ukunikezwa ukuvimbela amahlule egazini emilenzeni nakwezinye izingxenye zomzimba. Njengezidakamizwa eziningi ezikulolu hlu, iziguli zisebenzisa i-enoxaparin ukwelapha okunzima, izimo ezisongela impilo . I-Enoxaparin ivame ukunikezwa labo abalulama ekuhlinzweni okukhulu noma asebevele belaliswe embhedeni ngenxa yezinye izizathu zezokwelapha, ngokusho kwe Ikholeji yaseMelika Yezenhliziyo . Ngamanani entengo ebiza kakhulu emakethe, izindleko ze-enoxaparin ngaphezu kwezinye izindleko zezokwelapha ezihambisanayo ziyanezela.
ngingathatha i-benadryl isikhathi esingakanani emva kokuphuza
Amaphesenti alondoloziwe: 73%
Clonidine ngumuthi wegazi ophakeme ongasiza ekulawuleni umfutho wegazi ophakeme — uwedwa, noma ngokuhlanganiswa neminye imiyalo. Uzakwabo wegama lomkhiqizo, I-Kapvay , ngumuthi ongavuseleli ovunyelwe yi-FDA osetshenziselwa ukwelapha izimpawu ze-ADHD. Usebenzisa i-SingleCare, kungaba ngaphansi kwengxenye yesine yentengo yokuthengisa.
I-Urea , ngumuthi ojwayelekile otholakala ngaphansi kwamagama amaningi wemikhiqizo: Utopic, Aluvea, Aqua Care, Atrac-Tain, neminye. Kunqunyelwe ukuphatha izimo zesikhumba njenge-eczema noma i-psoriasis. Kungasiza futhi ukulungisa izinzipho ezonakele kusuka kuzinzipho ezingaphakathi. Ishubhu elilodwa lingaba nentengo, kepha abasebenzisi be-SingleCare bangonga kuze kufike kuma-73% ezindlekweni zokwelashwa.
Ukunakekelwa kwezempilo e-U.S. Kubiza ngokwanele ngaphandle kokukhokha imali eningi kakhulu ngemigomo oyidingayo. Ngekhadi le-SingleCare, uzokwazi ukufinyelela kuzintengo ezinhle zokukusiza uzizwe ungcono. Vele ufune umuthi wakho ku- singlecare.com noma kuhlelo lokusebenza lwe-SingleCare (olutholakala ku- Isitolo Sohlelo Lokusebenza noma Play music ). Uma usuthole intengo engcono kakhulu, letha isigqebhezana sakho somuthi ekhawunteni yekhemisi. Kulula kanjalo! Uzokonga ngokuzenzakalela u- $ 5 ongeziwe ku-Rx yokuqala oyigcwalisa nge-SingleCare. Ngemuva kwalokho, uzothola ukonga kwamalungu njalo ngemuva kwalokho.
Abazali bakaTom Brady, uTom Sr. noGalynn, Balwa Nge-COVID-19
Ayini amazinga ejwayelekile kashukela egazini?
ingabe ijusi le-cranberry lizokwelapha ukutheleleka kwemvubelo
isiqeshana sokulawula ukuzalwa lapho ungabeka khona
okudliwayo emakhazeni nasemkhuhlaneni
ngingathatha i-zzzquil ngemuva kokuphuza utshwala
ukwelashwa kwemvelo kokutheleleka nge-bv nemvubelo
umkhuhlane awusathathelani nini